El Bosque-ubunewunewu ngaphandle kwegrid cabin retreat
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguKabania
I-Jewel embindini wehlathi leentaba apho unokuqhawula ngokupheleleyo kwimpucuko kunye ne-detox ngelixa usonwabela yonke intuthuzelo kunye ne-cosiness efunekayo. I-off-grid ngokupheleleyo, inikwe amandla ngeepaneli zelanga kunye namanzi avela kwimithombo yendalo yeentaba. Akukho traffic kunye nabamelwane, kuphela ngamanye amaxesha unokuva iintsimbi zenkomo kwaye ubone amaxhama. Ixhotyiswe ngegumbi lokuhlambela loyilo kunye nekhitshi eyenziwe ngesandla, zonke izinto zasekhitshini eziyimfuneko, isofa ekhululekile, indawo yomlilo epholileyo, ibarbeque kunye nebhafu enemibono emangalisayo.
I-Jewel embindini wehlathi leentaba apho unokuqhawula ngokupheleleyo kwimpucuko kunye ne-detox ngelixa usonwabela yonke intuthuzelo kunye ne-cosiness efunekayo. Ngokupheleleyo ngaphandle kwegridi, ukuzimela kunye ne-Eco-friendly. Ikhabhinethi ikwindawo ekwanti kunesiqhelo enemibono kunye nemfihlo ekunzima ukuyifumana e-Asturias kwaye ngaphandle kweenkonzo zoluntu ezijikeleze ezinokuthi zifumaneke ezilalini nakwizixeko. Amanzi anikezelwa ngumthombo ongaphantsi komhlaba kwaye umbane uvela kwiipaneli zelanga. Akukho traffic kunye nabamelwane, kuphela ngamanye amaxesha unokuva iintsimbi zenkomo kwaye ubone amaxhama. Gcina ukhumbula ukuba ikhabhinethi yindlu yeentaba kwaye iyafikeleleka ngeendlela ezimxinwa zeentaba ezinokuba ngumngeni. Indlela iya kuhla inyuka kwaye kuya kubakho ukujika okubukhali kunye namatye avulekileyo endleleni, ke yiba nomonde.
Nangona kunjalo, eli khabhathi yakhiwe ngokutsha yakhiwe ngokutsha yobunewunewu yasentabeni ifana nqwa nelinye kwaye lingamava awodwa ngokupheleleyo. Ifestile enkulu yegumbi lokuhlala ikwenza uzive ngathi ukupeyinti. Yonke ifenitshala yegumbi lokulala yenziwe ngesandla kwaye isuka kwizinto zokuqala ze-cabin. Ikhitshi ine-countertop yoqobo eyenziwe ngamaplanga kwaye ixhotyiswe ngazo zonke izinto zasekhitshini eziyimfuneko.
Ikhabhinethi inombono wendawo evulekileyo kunye nebhedi ekhululekile kabini kunye nazo zonke izixhobo eziyimfuneko ukuze uhlale ukhululekile.
Kwindawo onayo iMovistar kuphela.
Indlu ifanelekile ukuba iqhawule kwaye ichithe ixesha elithile emahlathini asezintabeni, akukho TV njengoko kungekho mqondiso ufanelekileyo, kodwa uneembono ezimangalisayo ngefestile enkulu kwigumbi lokuhlala ukuze uzonwabisa kunye nezinye iincwadi. ngeSpanish kunye nesiNgesi. Ilinen yebhedi, iitawuli, itawuli yasekhitshini, isicoci sesitya kunye nejeli yeshawa, ishampu, ubisi lomzimba kunye neetyuwa zebhafu zinikiwe.
Njengoko iqhutywa ngamandla elanga, akukho microwave, umatshini wokuhlamba okanye umatshini wokuhlamba izitya endlwini. Ikhitshi ixhotyiswe ngefriji encinci kunye nesitofu segesi esinezitshisi ze-4 ukulungiselela ukutya okulula kunye nomenzi wekofu waseNtaliyane, ikofu, itshokolethi eshushu, iti, ityuwa, iswekile, ioli yeoli, iviniga kunye nezinye iziqholo ukuqinisekisa ukuhlala kakuhle.
Igumbi lokuhlala lixhotyiswe ngesifudumezi segesi kunye nendawo yomlilo (ibhakethi yokhuni kunye nepakethe yeetafile zomlilo zibonelelwa xa ufika), imidlalo ethile yebhodi, isithethi seBluetooth, iteleskopu, iibinoculars kunye nekiti yeTRX yokuzonwabisa kwakho.
Ngaphandle kwendlu unetafile enezitulo ezi-4, ii-chaise-longues ezi-2 kunye ne-BBQ (asiboneleli ngamalahle kuyo ngoko qiniseka ukuba uyithenga ngaphambi kokufika kwakho).
4.95 · Izimvo eziyi-146
Irhangqwe ngokupheleleyo lihlathi.
Umbuki zindwendwe ngu- Kabania
Asihlali kwipropati okanye naphi na kufutshane. Phezu kokubekisa iindwendwe ziya kufumana izikhokelo zepdf ezineenkcukacha ngalo lonke ulwazi olunokwenzeka kunye nekhowudi yokufikelela kwibhokisi yokutshixa yesitshixo.
Sisoloko sikulungele ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo efunekayo ukuqinisekisa ukuhlala kwakho kamnandi.
Asihlali kwipropati okanye naphi na kufutshane. Phezu kokubekisa iindwendwe ziya kufumana izikhokelo zepdf ezineenkcukacha ngalo lonke ulwazi olunokwenzeka kunye nekhowudi yokufike…
Inombolo yomthetho: VV.1599.AS
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Oriente de Asturias